Elifas asɛm a ɛto so abien (1-35)
Ɔkae sɛ Hiob de Onyankopɔn suro ato nkyɛn (4)
Ɔkae sɛ Hiob yɛ aniammɔnho (7-9)
‘Onyankopɔn nnye n’akronkronfo nni’ (15)
‘Abɔnefo na ehu amane’ (20-24)
15 Ɛnna Elifas+ a ofi Teman no kae sɛ: 2 “Wohwɛ a, onyansafo de nsɛm a aba nnim* beyi n’ano?Anaa ɔde apuei mframa bɛhyɛ n’afuru ma? 3 Sɛ wode nsɛm nko ara kasa kyerɛ yɛn a, ɛrenkosi hwee,Na mfaso biara nni kasa hunu so. 4 Wubu Onyankopɔn suro animtiaa,Na woma ɛyɛ den ma nkurɔfo sɛ wobedwen Onyankopɔn ho. 5 Efisɛ wo mfomso na ɛma wokasa saa,*Na wode tɛkrɛmadɛ daadaa nkurɔfo. 6 Wo ara w’ano na ebu wo fɔ, na ɛnyɛ me;Wo ara w’ano na edi adanse tia wo.+ 7 Adɛn, wone onipa a wodii kan woo no?Anaa wɔwoo wo ansa na nkoko reba? 8 Adɛn, Onyankopɔn ka ne tirim asɛm kyerɛ wo?Anaa ɛyɛ wo sɛ wo nko ara na wunim nyansa? 9 Ɛdɛn na wunim a yennim?+ Na ntease bɛn na wowɔ a yenni bi? 10 Nea wafuw dwen ne akwakoraa wɔ yɛn mu,+Mmarima a wɔanyin sen wo papa mpo. 11 Adɛn, Onyankopɔn awerɛkyekye sua ma wo?Anaa asɛm a yɛne wo ka no bɔkɔɔ no sua ma wo? 12 Adɛn nti na wudi wo koma akyi?Na adɛn nti na abufuw ama w’ani ayɛ kɔɔ saa? 13 Woama wo bo afuw Onyankopɔn,*Na woama nsɛm a ɛte saa apue afi w’anom. 14 Ɛbɛyɛ dɛn na onipa dasani ho atew,Na obi a ɔbea awo no ayɛ ɔtreneeni?+ 15 Hwɛ! N’akronkronfo* koraa, onnye wɔn nni,Na ɔsoro mpo, ɛho ntew wɔ n’ani so.+ 16 Ɛnde obi a ɔyɛ akyiwade na waporɔw,+Onipa a ɔnom amumɔyɛ sɛ nsu de, obebu no dɛn? 17 Mɛka akyerɛ wo; tie me! Nea mahu no, mɛka akyerɛ wo. 18 Nea anyansafo te fii wɔn papanom hɔ a wɔde ato gua+A wɔamfa ansie no, mɛka akyerɛ wo. 19 Wɔn nkutoo na wɔde asaase no maa wɔn,Na ɔhɔho biara antwam amfa wɔn mu. 20 Ɔbɔnefo fa ateetee mu ne nna nyinaa;Otirimɔdenfo hu amane ne nkwa nna nyinaa. 21 Ɔte nnyigyei a ɛyɛ hu wɔ n’asom;+Asomdwoe bere mu na akorɔmfo werɛmfo ba no so. 22 Onnye nni sɛ ɔbɛtetew ne ho afi sum mu;+Sekan na ebedi ne nam. 23 Ɔnenam hwehwɛ aduan.* Na obisa sɛ, ɛhe na ɛwɔ? Onim paa sɛ esum da no abɛn. 24 Amanehunu ne ahoyeraw hunahuna no daa;Ebu fa no so te sɛ ɔhene a wayɛ krado rekɔko. 25 Efisɛ ɔma ne nsa so tia Onyankopɔn,Na ɔyɛ ne ho sɛ ɔkorɔn sen ade nyinaa so Tumfo no; 26 Ɔyɛ aniammɔnho de ne kyɛm pipiripi* a ɛyɛ den noKɔ no so; 27 N’afono nyinaa atotɔ,Na n’afuru ayɛ kɛse; 28 Nkurow a ɛbɛsɛe na ɔbɛtena mu;Afi a obiara rentena muA ɛbɛdan abo asum hɔ na ɔbɛtena mu. 29 Ɔrennya ne ho, na n’ahode rennɔɔso,Na n’agyapade rentrɛw wɔ asaase so. 30 Ɔrentetew ne ho mfi sum mu;Ogyaframa bɛma ne dubaa* akisã,Na Onyankopɔn anom* mframa bɛpra no akɔ.+ 31 Ɛnsɛ sɛ ɔfom kwan na ɔde ne werɛ hyɛ adehunu mu,Efisɛ adehunu na obenya afi mu; 32 Ɛrenkyɛ na aba no so.Na ne nkorabata renyɛ frɔmfrɔm da.+ 33 Ɔbɛyɛ sɛ bobe dua a ɛporow n’aba bun gu,Na wayɛ sɛ ngodua a ɛporow ne nhwiren gu. 34 Efisɛ abɔnefo* guabɔ rensow aba,+Na ogya na ɛbɛhyew wɔn a wogye adanmude* no ntamadan. 35 Wonyinsɛn bɔne na wɔwo mmusu,Na nnaadaa ahyɛ wɔn yafunu ma.”
^ Anaa “nimdeɛ hunu.”
^ Anaa “wo mfomso na ɛkyerɛ w’ano kwan.”
^ Nt., “Woadan wo honhom atia Onyankopɔn.”
^ Ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ abɔfo.
^ Nt., “n’akyɛm a akyi yɛ apɔwapɔw.”
^ Kyerɛ sɛ, anidaso a ɛwɔ hɔ sɛ ebesi ne dedaw mu.
^ Nt., “N’anom.”